Isikhumba samafutha siyinkinga kwabaningi, kokubili amantombazane nabafana. Ngeshwa, izimpawu ukuthi unesikhumba samafutha: khanyisa ku-T-zone, kwi-chin, naku-acne. Izithobezi ezisabekayo, abanikazi bamanoni bakhanya ebusweni, basebenza ngokuzikhandla, ngenxa yokuvinjelwa kwama pores nokubunjwa kwama-pimples. Yiqiniso, umuntu angathemba ukuthi lokhu konke ukuthuthumela okuthulile kuzophela ngokuvuthwa kocansi. Kodwa, hhayi iqiniso. Ngakho-ke, kunconywa ukuphatha ukwelashwa kwesikhumba nokuvimbela.
Uma ungasazi ukuthi unjani uhlobo lesikhumba, ungaqhuba ukuhlolwa okulula. Hlanza ubuso bakho, bese ulencika ebunzini lakho, isibonelo, ngokumelene nesibuko. Uma kungazelelwe kukhona isicwecwe se-fat esibukweni, ungasho ngokuphepha ukuthi unesikhumba samafutha. Ngizokusheshisa ukuze uzinciphise kancane: naphezu kokuthi uhlushwa ngenduna futhi awukwazi ukususa ukukhanya kobucwebe ebusweni bakho, kulokhu kunama-pluses. Isikhumba se-oily silahlekelwa umswakama ngaphansi kwesikhumba esijwayelekile noma somile. Futhi lokhu kusho ukuthi isikhumba samafutha ngaso sonke isikhathi sikhulelwe ngokwanele futhi imibimbi kuso iyovela kamuva kakhulu. Njengoba sekukhulunywe ngenhla, izilonda ezinomsoco osebenza ngesikhumba samafutha ziyasebenza kanzima, okhiqiza inani lamafutha avikela isikhumba emiphumeleni eyingozi yemvelo.
Kodwa, noma kunjalo, zonke izintombazane ziphupha ukuba zihle kakhulu. Futhi intombazane enhle kunazo zonke kufanele ibe nesikhumba esiphelele, ngakho ake sizame ukuthola ukuthi singasusa kanjani isilwane esibuhlungu ebusweni. Isikhumba esinamafutha kufanele sihlanzwe ngokucophelela futhi le nqubo ayifanele isepha evamile. Zonke izixazululo ozisebenzisayo ukuhlanza isikhumba kumele zibe buthambile futhi zibe ne-pH engathathi hlangothi.
Akunjalo noma kunjalo, ungayeki ukondla isikhumba sakho. Phela, isikhumba samafutha sidinga inani elanele lezakhi. Emasimini nasezitolo zokuhle, kukhona ukukhethwa okukhulu kwama-moisturizers for isikhumba samafutha. Amantombazane, okubaluleke kakhulu, kunoma yikuphi okwenzayo angathathi ikhanda ukuze "uphume" amahlumela namachashazi amnyama! Uzokwenza kuphela isimo sesikhumba, ngakho-ke kuzo zonke ezinye kuzoba khona izibazi, okuzobe kunzima kakhulu ukuziqeda, kunokuba zikhanyise amafutha ebusweni.
Udinga ukuthanda isikhumba sakho, usihloniphe futhi usihloniphe, ngisho noma i-iridal futhi ibangela izinkinga eziningi. Kabili ngosuku, ngokugeza, sebenzisa i-gel ekhethekile. Ukuze uthuthukise umphumela, sebenzisa ibhulashi elithambile futhi. Ngakho-ke, ungahlanza ama-pores ekukhusheni.
Ngemuva kokugeza, sebenzisa i-lotion ebusweni nge-swab yekotini equkethe i-acetylsalicylic acid. Ngenxa yale nqubo elula, ama-pores azohlanzwa, ama-fat glitter ebusweni ayophela. Futhi ususa ebusweni izinhlayiya ezifakwe ngobuningi. Futhi, ungakhohlwa - unganisa isikhumba!
Kukhona lonke i-arsenal of zokupheka ngamaski, okuzosiza ukuqeda ukukhanya kwamehlo ebusweni.
Khetha okuphumelela kakhulu.
1. Ukuze usule isikhumba, sebenzisa i-kefir kuso nge-swab yesikotini. Futhi ushiye imizuzu engu-15. Ngemuva kokuthi isikhathi sesiphelile, geza imaski ngamanzi afudumele.
2. Ukuze unciphise ama-pores futhi uthuthukise ubuciko, gcoba amaprotheni ane-lemon. Faka isicelo engxenyeni ebusweni imizuzu engu-15. Bese ugeza ngamanzi afudumele.
3. Ukuhlanza isikhumba: i-whip 1 tsp. ilamula kalamula kanye no-20 g wemvubelo. Bese ungeza ubisi obushushu obuncane. Faka isicelo esikhumbeni imizuzu eyishumi nanhlanu. Hlanza ngamanzi afudumele.
Futhi, akunandaba ukuthi iyiphi iresiphi oyikhethayo yokwelapha isikhumba samafutha. Khumbula njalo ukuthi noma yisiphi isikhumba sidinga ukunakekelwa nokunakwa. Ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngithi leso sikhumba samafutha sidinga ukunyusa amanzi.
Zithande wena, ujabule futhi ujabulise abanye abakuzungezile ngobuhle bakho nokuntuleka kwamafutha ekhanyayo ebusweni bakho.
Ungenza kanjani ukhilimu wekhanda ekhaya?
Konke Mayelana ne-Glycolic Peeling
Ukushisa nokucubungula isikhumba sobuso
Isimo sengqondo se-cosmetology yobuhle emazweni ahlukene
Ukunakekelwa kahle kwe-eyelashes ewonakele
Izimo zokugcina ubisi lwebele
Indlela yokukhipha umfana onomunyu
I-veal brisket ne-quince
Ukudla kanye nempilo: indlela yokudla kahle?
Isikhathi esingakanani nokuthi ungaphika kanjani imbewu ngokufanele: zokupheka zokupheka ama-cob ngezithombe namavidiyo
I-Horoscope ngoJanuwari, inhlanzi, owesifazane
Senza i-Cinnabon (CINNABON) ekhanda ekhaya: zokupheka nezithombe
Ukunakekela izipikili nezandla
Indlela yokuhlanza isibindi ngemithi
Isimo Sezulu eSt. Petersburg ngoNovemba 2016 - Isibikezelo sezulu esilungile kunazo zonke kusukela ku-Hydrometcenter ekuqaleni nasekupheleni kukaNovemba
Ungasusa kanjani isimo sengqondo samanga sengqondo?
Ukuzalwa kwezinja - i-husky yaseSiberia
Inhlanzi nemifino ebhakabhaka
Ungasusa kanjani ama-freckles namabala we-pigment ebusweni
Ukuphazamiseka okumangalisayo kwemvelo yomuntu